Hasha Geela Cuntoo Cabaada
Arintan hadda taagaan ee Zamzam Axmad Ducaale, oo xaqiiqadeedu soo bixi doonto, martina ku ahayd Hargeysa, ahna gabadh yar oo agoon ah kana soo jeeda degaankii hore loo odhan jiray British Somaliland in kasta oo ayna reer Hargeysa isir la wadaagin.
Waxaan cidina qiil u raadin karin dhibaatooyinkii xukuumaddii hore u geysatay dadka waqooyiga Soomaaliya ku dhaqan. Laakiin waxaan loo cudurdaari karin cadaawadda ay arintaas dadka reer waqooyi ugu reebtay Soomaalida kale. Qabiil, koox iyo shakhsi kastoo tusay ka xumaansho arintaas ah, loogama qaadan wanaag ama niyad sami laakiin waxaa moodaa in loo qaatay wiirsi.
Waxay cadaawaddu gaadhsiisey oo ku xambaartay in dadka aan isir la wadaagin da’ kasta ama aqoon kasta iyo meel kasta oo ay ku nool yihiin ay arintan qayb ka ahaayeen. Waxaa kaloo lagu dhaqmay qaacido ah in si kasta oo looga aar gudan karo looga aar gudo, iyadoo aan loo eegin xeer iyo xasabiyad midna.
Waxaa saldhig laga duulo, dad iyo dowladba laga dhigtay in wanaaga dadka reer waqooyi iyo horumarkiisu ku jiro dhibta inta kale (kuwa koonfureed). Waxaa hoosta laga xariiqay in hagaaga koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Xamar ay tahay halaag dadka waqooyi iyo dowladooda labadaba. Arintaas waxaa si wanaagsan u maareeyey Allaah ha u naxariistee Maxamad Ibraahim Cigaal, hase yeeshee, dhimashadiisa ka dibna karkaarada ayey jabsatay.
Waxaa dulucdaas kore markhaanti u ah arimahan soo socda:
Shirkii Jabuuti ee Soomaalidu gacanta ku haysey, dadkii martida ahaa ee shirka ka qaybgelayey intii aan Carta loo rarin dadka, dowlada Jabuuti waxay u kala qaybisay xaafadaha maqaalada iyo hudheelada (sida ciyaarihii gobalada ee Soomaaliya). Dadkii martida ahaa ee hudheelada ay leeyihiin dad asal ahaan ka soo jeeda waqooyi oo reer Jabuuti ah lagu qoray waxaa dhacday in boorsooyinkoodii debada loo soo dhigay. In kastoo dowlada Jabuuti raggii hudheeladaa lahaa shaqo ka qabtay cashuuro aan maskax geli karina lagu soo rogay oo qaybtood ku qasabtay sulufaat (bankruptcy.), dad badan oo reer Jabuuti ah oo Soomaalinamada ka faani jirayna ay wadaniyad ku abuurtay. Haddana uur-ku-taalo waxa la heli doono awgeed lagu liqay ayey dad ku reebtay.
Dowladdii Jabuuti waxay ku soo rogtay isla waqtigii shirka Soomaalida ee Jabuuti in dhamaan masaajidda xaafadaha laga quunuudo oo loo duceeyo Soomaalida in Allaah dhibka ka qaado. Waxaa jirtay masaajiddii ku tiilay xaafaha dadka reer waqooyi in arintaa laga diiday welibana rag imaamo ah lagu budheeyey. Iyana waa mahadho taariikheed.
Waxaa loo bareeray in rag qadiyad Soomaaliyeed u taagan ama gumeysi ay gacanta ugu jiraan iska caabieyey inta la aruursho cadowgoodii gacanta loo geliyo, rag kale oo cid ahaan la wadaagana isla wadadaas la mariyo sabab la’aan.
Waxaa ku xigtay in dad Soomaaliyeed oo nabad gelyo ugu soo cararay waqooyiga, cadow dhulkoodii aafeeyeyna is yidhi meesha kaga dhuunta inta wax is bedelayaan in la raafo, in badan oo iyaga ka mid ahna ay u dhinteen rafaadkii arintaas kala soo gudboonaadey. Waa taariikh madow oo buugga u gashay Waqooyiga Soomaaliya.
Qodobadana kore iyo kuwa kale oo badan ayaa Soomaalida ku xambaarayo in arimahan iyo dadka saameynta ku lehba mudnaantooda la marsiiyo, arinta Soomaaliya iyo “Soomaaliland”na meel cad looga soo haro.
Qiil uma noqoneyso in lagu daafaco arimahaas oo la yidhaa waxay gaadh u yihiin reer Galbeed ee anagu haddaanu nahay reer Bari magacuun baa naga dhexeeya. Soomaali waxay diyaar u tahay in dhaqso looga faraxasho arimahan ujeedada loo murgiyey, marka waxaan laga maarmeyn in la is hor fadhiisto Soomaalina diyaarsatay sidii ay idiin qaabili lahayd. Marka waxaa u soo jeedin dowlada Hargeysa arimahan inay ku soo talo galaan:
1. In dirta reer waqooyi talo ay ku mideysan yihiin la yimaadaan oo dhinaca go’ida ah, khariidad ay isku raacsan yihiin, waayo, khariidadii british Somaliland waxay ku ekayd xilligii gumeysiga.
2. In aaney ku soo talo gelin Sool, Sanaag Bari iyo Cayn (Buuhoodle) ka hadalkeed, arin cad ayey qaateen oo ah dhinaca go’ida.
3. Arintii sadburinta ee lagu ixtiraamayey walaalaha midowga Soomaaliyeed jecel waqtigeedii waa dhamaaday waayo, midho dhal sidaa u buudhan maleh, Soomaalina ijiid aan ku jiidee dani uguma jirto. Ragga gorgortan idinku sugayaa waa kuwo quusnimo ka dhowdahay, xagga gorgortanka, waana kuwa og arimahan kore oo dhan. Hadaad ina Cali Waraabe soo dirsataan waxaa u diyaar ah kuwa la mid ah.
4. Haddii intaa iyo kuwo kale oo macquul ah la waayo, arintu waxayna hureyn in la yidhaa war colka waraf malagu dayey.
Waxaa la joogaa waqtigii la xisaabtami lahaa oo nin waliba jihadii la gudboonta ku dhaqaaqi lahaa. Waxaad tirsaneysaan miiska la imaada Soomaaliduna sidaas si le’eg, anigaa wax I gaareen dhibka weyna geystay, waxay noqoneysaa hashii geela cunaysay oo haddana caabaadeysey, laguma qanci karo.